နေစဉ်အင်တာနက်ကိုအများကြီးရှိပါတယ်နေရာများမှသွားလျှင်သင်၏အမျိုးအစားလူတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ကိုယ့်အချစ်ကား၊သင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်လာ unstuck ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးအဲဒီတော့ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါသင်၏အချို့အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားပျော်မွေ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အလှန်အတွေ့အကြုံ။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါ၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်တွေအများကြီးအပလက်ဖောင်းများထွက်ရှိပါသည်ဒီရက်ပိုင်းသာပေါ်အာရုံစူးစိုက်အမာခံဗီဒီယိုများ–နှင့်အတူအလွန်အနည်းငယ်ပေးကမ်းဖို့စွမ်းရည်ကိုေခၚရိုက်ချက်များသို့မဟုတ်အရာကိုထိန်းချုပ်သွားမယ့်။, အာရုံညစ်ညမ်းဟိုကားဒီဂိမ်းအတွက်ဂျိုဟန်သစ်တစ်ခုစံပြနှင့်စံညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားကျွန်တော်ထင်တာပေါ့သွားဖို့လုံးဝရိုင်းသည်။ အဖြစ်ဝေးအဖြစ်မြင်ရသည်၊ဒီ၏အနာဂတ်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသင့်ရဲ့ကြက်ဖြစ်သွားသည်အပြည့်အဝကျေနပ်မှုနှင့်အတူ၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့! ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရောက်စေဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးနှင့်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သောအခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊မည်သည့်အကြောလူဖို့လိုလားကြောင်းတစ်ခုပြ jerking ပျော်စရာရှိသည်သွားဖို့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတတ်နိုင်သမျှအပေါ်ညာဘက်ကိုဒီမှာညစ်ညမ်းချာညမ်း။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူချင်?, ဖတ်ရှုဖို့အခမဲ့ခံစားရအောက်တွင်ချအတွက်အပိုဆောင်းအသေးစိတ်အချက်၊သို့မဟုတ်ရိုးရိုးတက်လက်မှတ်ထိုးယခုအဘယ်အရာကိုမြင်ညမ်းချာညမ်းဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်!
အခါကျွန်တော်တို့၏သမိုင်းညမ်းဂိမ်းအွန်လိုင်း၊ဒါကြောင့်အလွန်ထင်ရှားကိုသင်ရုန်းကန်အတော်လေးနည်းနည်းရတဲ့မှကြွလာသောအခါအရည်အသွေးကောင်းအရေးယူကြောင်းရဲ့အခြေပတ်လည်အမာခံပျော်စရာလည်းပျော်စရာကစားရန်။ ကဟန်နှင့်အတူကဲ့သို့ကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အနည်းငယ်မက်လုံးပေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်အရွယ်ရောက်ပြီးဖြန့်ချိ၊ယိုထွက်ရှိခဲ့ပါပြီဆန္ဒလိုက်လျောညီထွေနှင့်အတူအကြိမ်နှင့်ရိုးရိုးမရတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအမှန် headspace အတွက်ထုတ်လုပ်မှုမှာဒီဒိုမိန်း။, ဘာဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသံသရာမှာညမ်းချာညမ်းဂိမ်းကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ကြောင်းအရည်မှန်းချက်၏အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြာဂိမ်းများနှင့်အထင်ကကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ပျော်စရာအရာအားလုံးကိုကဒီမှာအမှန်တကယ်ကစား။ ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းဖို့တစ်စုံတစ်ဦးတလျှောက်လာနှင့်ခိုးယူသို့မဟုတ်မိုဃ်းချုန်းဖြစ်စေ:အဘယ်အရာကိုအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်အများကြီးတစ်ငရဲ၏အရင်းအမြစ်များသို့ဤအာကာသရနိုင်အောင်သေသေချာချာပြောသောအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဒီနေရာမှာရာပူဇော်သက္ကာကိုဖွင့်အဝေးထက်ကျော်လွန်သည့်အခြားပြောက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။, သင်တာပေါ့သဘောပေါက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဤအမျိုးအစား smut သွားသည်လုံးဝသင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်–ဖြစ်၏။
အစိတ်အပိုင်းများ၏အယူခံညမ်းဂိမ်းအကြောင်းသင်အမှန်တကယ်နိုင်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူခြင်းငှါအဘယ်သို့သွားမယ့်၊နှင့်ကျွန်တော်ထင်သည်ဤအကြောင်းရေးပါတော့မယ်ဆိုရင်ဖို့ရှိသည်မည်သည့်အဆင့်အောင်မြင်ရန်ကြွလာသောအခါမီဒီယာကကျွန်တော်တို့နေထွက်ရှိပါတယ်။ ကြည့်ရှု၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးသည်အကြောင်းအရာရဲ့အစိတ်အပိုင်းစျေးနှုန်းသင်ပေးဆောင်ဖို့သွားကြသည်တခြားနေရာ–ရိုးရှင်းစွာသောကြောင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်! ဒါပေမဲ့လေးလေးနက်နက်၊ကြွလာသောအခါမှ simulation အရေးယူပါတယ်၊ကျနော်တို့ထည့်သွင်းသင်၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ဒါကြောင့်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဘယ်အရာကိုသင်လိုဖြစ်ပျက်။, ဤသည်အကယ်စင်စစ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတည်းက၊ဒါကြောင့်အများအပြားဂိမ်းကစားချစ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမှအဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်မယ့်အကောင်းနဲ့တကယ်ချစ်သူများသည်မိမိတို့သုံးစွဲဖို့ဒေတာဘေ့စသောကြယ်၏ချည်နှောင်စေပည္ဆိုင္ရာနောက်တဖန်မကျော်နှင့်။ ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်သောငါတို့သည်တစ်ဦးအစွန်းရောက်အဆင့်နားလည်မှုနှင့်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်၏ဤစက်မှုလုပ်ငန်းကြ်န္ေတာ္တိုမရစေခြင်းငှါအရာ၊လက်ျာအပေါ်ပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်များ၊တဦးတည်းအရာတစုံတခုကျနော်တို့အမှန်တကယ်ဂုဏ်ယူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုသင်ဆောင်ကြဉ်းရန်အမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လိင်င့်နှင့်အင်ဂျင်သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျအင်တာနက်ပေါ်မှာ။, ဤဖြတ်တောက်အစွန်းနည်းပညာကိုသင်လဲကျပါလိမ့်မယ်ဒေါက်ကျော်ဦးခေါင်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌–ကိုယ့်ကြောင့်ယူစမ်းသပ်မောင်းနှင့်အကြားခြားနားချက်ကိုမြင်သောအရာကိုနိုင်ပြီးအခြားနေရာများထွက်ရှိပါတယ်နိုင်စွမ်းကိုပေး။ ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရှေ့ဆက်၏ကျန်မှကြွလာသောအခါအမှန်တကယ်မော်ကွန်းနှင့်လိင်ဂိမ်းပျော်စရာ။
ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့ဖွင့်စောင့်ရှောက်ဖန်တီးထံမှသင်တို့ကိုအခမဲ့အကောင့်ကိုဒီမှာညစ်ညမ်းချာညမ်း။ သင်သိသောနိမိတ်လက္ခဏာတက်ဖြစ်စဉ်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ချက်ချင်းလက်ငင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်–အပေါင်းသင်သိသောအတွင်း၊ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအချို့အရွယ်ရောက်ဖျြောဖွရေးအတွက်ပတ်ပတ်လည်ဂိမ်းပုံစံကသင့်ရဲ့အရိုးအချစ်ရန်သွားကြသည်။ ကစားမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်နှင့်သက်သေအရှိန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်ပူဇော်ရန်–ဤသင်ပို့ရူးနှင့်သင်ချင်တယ်ဘယ်တော့မှထွက်ကြိုးစားဖို့နောက်ထပ်ပေါ်တယ်ဖန်များအတွက်ဂိမ်းကစားအွန်လိုင်း။ စောင့်ရှောက်မှုယူကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီးမှပြန်လာညမ်းချာညမ်းဂိမ်းများအခါတိုင်းသင်များအတွက်လိုအပ်တဲ့အစည်းအဝေး၏အမာခံဖြေ။, ကျွန်တော်တို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအခြားသူများကိုမသွားဘူး!